hoy i Ameliah Avotra, tovovavy iray lasibatry ny mpangalatra tao anaty taksibe, ny faran’ny herinandro teo. Araka ny fanampim-panazavany, nandray fiara fitateram-bahoaka zotra “F” teo Andoharanofotsy izy ary niala teo amin’ny fiantsonana : “Fasika”. Gaga izy rehefa niala ilay fiara fa nivoha ny kitapony teo anoloany, efa tsy tao intsony ny fitoeram-bola sy ny entana sarobidy tahaka ny karatra fisotomambola amin’ny banky. Avy hatrany ilay tovovavy dia nanakana môtô ary tratra teo amin’ny fiantsonana afaka an’Ankadimbahoaka ilay taksibe, saingy efa niala teo Ankadimbahoaka ilay rangahy izay nahiahiana teo akaikiny sy ny vady aman-janany.
Araka ny voalazan’ny mpamily tamin’ilay very fananana dia vao tafidina ilay lasibatra, nangataka hidina ilay raim-pianakaviana saingy ilay vadiny nitrotro zaza kely no nilaza fa aleo Ankadimbahoaka. Niverenana teo Ankadimbahoaka fa efa nanjavona ireo voarohirohy tamin’ity halatra anaty kitapo ity. Eo am-piomanana ny hametraka ny fitarainana any amin’ny mpitandro filaminana ny lasibatra eto am-panoratana ny vaovao. Samy variana no fiantson’ny fiarahamonina io fangalarana io izay tsy mifantoka noho ny hery hafahafa ny lasibatra.